Ivenkile yeVenkile iyaphula irekhodi yexesha lonke ngoNovemba | IPhone iindaba
Ukusukela ekuzalweni kwevenkile ye-iOS, kwakamsinya emva kokumiliselwa kwe-iPhone yoqobo, inani leapps kunye nemidlalo ekhoyo iphindaphindile, inika amawaka wabaphuhlisi abancinci ithuba lokufumana indlela yokuziphilisa ngokwenza into abayithandayo. uninzi.
Kodwa ayisiyiyo kuphela imisebenzi kunye nemidlalo eye yaphindaphindeka kule minyaka idlulileyo, kodwa kunye nokuthengisa, ingeniso kunye neenzuzo, zombini iApple ngokwayo kunye nabaphuhlisi. Kwaye ngoku uPhil Schiller ubhengeze nje ku-Twitter oko iVenkile yeApple "yayineyona ntengiso iphezulu yenyanga kwimbali yeVenkile ye App" ngo-Novemba ka-2016.
UPhil Schiller, usekela-mongameli omkhulu ka-Apple wentengiso yehlabathi, usandula ukubhengeza ngomyalezo kwiakhawunti yakhe yobuqu kwinethiwekhi yoluntu iTwitter ngoNovemba 2016 wabona "eyona ntengiso iphezulu yenyanga kwimbali yeVenkile ye App". USchiller akanikanga zinkcukacha zithe kratya. kule meko, kude namanani ekhonkrithi ngokunxulumene nale rekhodi yenyanga yentengiso yenkampani.
Kwasekuqaleni kukaJanuwari, uApple wabhengeza ukuba abathengi basebenzise i-1,1 yezigidigidi zeedola kwii -apps kunye nokuthenga ngaphakathi nohlelo kwiiveki nje ezimbini zeholide.
Ezi ndaba ziza kanye emva kokuba iApple ihlaziye amacandelo aqaqambisiweyo kwiVenkile yeApple nakwiVenkile yeeVenkile nakwiVenkile yeTunes, nazo zonke izintlu ze Eyona nto ingcono ngo-2016.
U-Apple ukwabhengeze amabhaso athi nyaka ngamnye abonelele ngeli xesha, i "App yoNyaka" kunye "nomdlalo wonyaka" we-iPhone, i-iPad, iApple TV, iApple Watch neMac. Ezinye zezi zicelo yiPrisma, Clash Royale, Bear, Ubomi buyinto engaqhelekanga kunye neMySwimPro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ivenkile yeeVenkile iyaphula irekhodi yexesha lonke ngoNovemba
I-Apple ikhupha i-beta yesixhenxe ye-iOS 10.2